Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Iyo Sida Ay Ciyaartoydu Ugu Kala Wareegayaan Kooxaha Marka Uu Furmo Suuqa Ciyaartoyda - jornalizem
Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Iyo Sida Ay Ciyaartoydu Ugu Kala Wareegayaan Kooxaha Marka Uu Furmo Suuqa Ciyaartoyda
Paris St Derman oo reer faransa ah ayaa si waali ah ugu jirta suuqa ciyaartoyda, waxaana markan lala xiriirinayaa laba xidig oo reer Argentin ah Lavezzi oo Napoli u ciyaara iyo Higuain oo Real Madrid u ciyaara. Zlatan Ibrahimovich ayaa ka dhawaajiyay inay soo dhawdahay markii uu isaga dhaqaajin lahaa kooxdiisa Milan oo ku guul dareysatay hanashada horyaalka Talyaaniga, xidigan oo ku caan baxay guur guurida iyo koox badalashada ayaa lasoo sheegay in kooxda Real Madrid isha la raaceyso. Jariirada kasoo baxda magaalada London ee Metro ayaa shaaca ka qaaday in kabtanka Arsenal kusii jeedo kooxda Manchester City oo u balan qaaday aduun lacageed oo gaaraya 270 kun oo Paund lacagta Ingiriiska ah Isbuucii, waxaana la dhihi karaa waa lacag ay adagtahay in ciyaariyahan diido maadaama ay uga harsan tahay mustaqbalkiisa kubadeed wax aan ka badneyn 5 ilaa 6 sano. Kooxda Tottenham ee uu macalinka ka yahay Harry Redknapp ayaa culeys weyn saareysa kooxda ay isku magaalada yihiin ee Arsenal kadib markii ay cagta cagta u saartay oo ay dalab u wada dirsatay inta badan xidigo oo macalin Wenger horey u sheegay inuu jecelyahay lasoo wareegidooda, waxaana kamid ah Jan Vertonghen oo Belgium ah una ciyaara Arsenal, Eden Hazard oo isna Belgiun ah una ciyaara Lille oo faransiiska ah iyo ugu danbeyn Junior Hoilett oo u ciyaara kooxda Blackburn ee dalka Ingiriiska. Kooxda Chelsea ayey u badantahay inay booska macalinimo ku wareejiso Fabio Capello oo dhawaan ka dhawaajiyay sida uu u daneynayo inuu qabto koox ka dhisan Ingiriiska oo kamid ah kooxaha waaweyn, waxaana hadalkaasi la dhoola cadeeyay milkiile Abramovitsj. Barcelona ayaa walaac badan ka qabta safarka Guardiola iyo sida uu macalina cusubi ula qabsan doono farsamadii iyo taatikada macalinka sii socda oo wax badan ka badalay habkii ay kooxdu ahayd inta uusan imaan, waxaana lasoo sheegayaa in macalinkan cusubi dhaqsaba dalbaday weeraryahano badan oo ka duwan kuwa ay kooxdu hada isticmaasho, waxaana uu xooga saari doonaa nambar 9 awood badan khatarna ku ah madaxa oo ah halka ay Barcelona aadka uga liidato. Paris St Derman oo reer faransa ah ayaa si waali ah ugu jirta suuqa ciyaartoyda, waxaana markan lala xiriirinayaa laba xidig oo reer Argentin ah Lavezzi oo Napoli u ciyaara iyo Higuain oo Real Madrid u ciyaara.
Zlatan Ibrahimovich ayaa ka dhawaajiyay inay soo dhawdahay markii uu isaga dhaqaajin lahaa kooxdiisa Milan oo ku guul dareysatay hanashada horyaalka Talyaaniga, xidigan oo ku caan baxay guur guurida iyo koox badalashada ayaa lasoo sheegay in kooxda Real Madrid isha la raaceyso.
Jariirada kasoo baxda magaalada London ee Metro ayaa shaaca ka qaaday in kabtanka Arsenal kusii jeedo kooxda Manchester City oo u balan qaaday aduun lacageed oo gaaraya 270 kun oo Paund lacagta Ingiriiska ah Isbuucii, waxaana la dhihi karaa waa lacag ay adagtahay in ciyaariyahan diido maadaama ay uga harsan tahay mustaqbalkiisa kubadeed wax aan ka badneyn 5 ilaa 6 sano.
Kooxda Tottenham ee uu macalinka ka yahay Harry Redknapp ayaa culeys weyn saareysa kooxda ay isku magaalada yihiin ee Arsenal kadib markii ay cagta cagta u saartay oo ay dalab u wada dirsatay inta badan xidigo oo macalin Wenger horey u sheegay inuu jecelyahay lasoo wareegidooda, waxaana kamid ah Jan Vertonghen oo Belgium ah una ciyaara Arsenal, Eden Hazard oo isna Belgiun ah una ciyaara Lille oo faransiiska ah iyo ugu danbeyn Junior Hoilett oo u ciyaara kooxda Blackburn ee dalka Ingiriiska.
Kooxda Chelsea ayey u badantahay inay booska macalinimo ku wareejiso Fabio Capello oo dhawaan ka dhawaajiyay sida uu u daneynayo inuu qabto koox ka dhisan Ingiriiska oo kamid ah kooxaha waaweyn, waxaana hadalkaasi la dhoola cadeeyay milkiile Abramovitsj.
Barcelona ayaa walaac badan ka qabta safarka Guardiola iyo sida uu macalina cusubi ula qabsan doono farsamadii iyo taatikada macalinka sii socda oo wax badan ka badalay habkii ay kooxdu ahayd inta uusan imaan, waxaana lasoo sheegayaa in macalinkan cusubi dhaqsaba dalbaday weeraryahano badan oo ka duwan kuwa ay kooxdu hada isticmaasho, waxaana uu xooga saari doonaa nambar 9 awood badan khatarna ku ah madaxa oo ah halka ay Barcelona aadka uga liidato.